Indlela Abazali Abasonwabisa Ngayo - Khetha Uphawu
Indlela Abazali Abasonwabisa Ngayo
Umzabalazo ongundoqo we Inyanga ibonakaliswa ngobuthathaka nokuthantamisa, kwaye kaninzi iya kutolikwa njengobuthathaka kumanqaku ayo omsindo, uloyiko okanye ingqumbo. Nangona kunjalo, kubonakala kungenakwenzeka ukukhula ngaphandle kweemvakalelo ezingathandekiyo ukuba azikhathalelwanga, zivuleleke kwaye zicocwe ukuze sibone ngokwenene amandla esiwanikiweyo ngokusikelelwa ngobukho bethu basemhlabeni kunye nobomi esibuphilayo. yonke imihla.
Umthi Wentsapho Yethu
Usapho lwethu lubonwa ngcono ngokuma kweNyanga, yethu indlu yesine , umlawuli walo, kunye neeplanethi esiziphethe kumqondiso Umhlaza . Uphawu lwe Capricorn ithetha ngezithunzi zayo nezinto eziza njengeziphumo zamadabi eemvakalelo ashiywe kubumnyama belizwe leemvakalelo lookhokho bethu. Ayimangalisi loo nto ISaturn ibonwa njengesona sithunzi simnyama soMphefumlo, izisa iminyaka yosizi kunye nosizi ngeengcaciso zesintu kwaye isishiye siphukile kwindlela yethu eya kulonwabo lobuqu. Kubonakala ngathi ngumngeni wethu omkhulu wokuzibona siyinxalenye enkulu kakhulu, inkqubo yeSaturn kunye nabo bonke ababema phambi kwethu, ngoko sinokuba namandla okuphumelela kwimigudu yethu yobuqu.
Izikhundla ezicelomngeni zeNyanga ziya kubonisa imisebenzi ekufuneka uMphefumlo wethu uyoyise kobu bomi, ukujongana nemicimbi ebuhlungu ebisoloko ikho kumthi wosapho lwethu kwizizukulwana kwaye yasibizela ukuba sisonjululwe. Akufunekanga sizithwalise umthwalo onzima kakhulu nangona, njengoko silapha kuphela ngenxa yesabelo sethu esilungileyo, kwaye sibuyisele oko kufunekayo ukuzisa isidima nothando kwinkqubo yethu kunye nabo bangaphakathi kuyo abangazange banikwe amandla. ilungelo lokuthatha indawo yabo efanelekileyo emanzini ethu kunye neemvakalelo zabo ezimbi.
Iimvakalelo kunye neMithunzi yazo
Xa into ingenziwanga kakuhle kwihlabathi lethu leemvakalelo, iguqukela ekubeni ingalunganga kwaye iza ngendlela yethu kwiimeko ezingaphandle kolawulo lwethu. Oku kukubaluleka kwamabali ekwabelwana ngawo yi Ilanga kunye noSaturn, apho umntu uyazi kwaye ulungele ukusebenzisa nantoni na ebomini kwindalo ecocekileyo, kwaye enye i-outlet, ethiywe ngokuba yinto nje eyiyo. Ngakolunye uhlangothi, iSaturn ingqiqo yethu yokukhusela, ukudibanisa kwethu noThixo kunye nesakhiwo sethu sangaphakathi (nangaphandle) esihlala kuyo yonke into. Zombini izigqeba zinobudlelwane bazo kunye neNyanga, iSaturn imile yayichasa ngolawulo lweempawu ezichasayo, kunye neLanga yinkqubo yayo yokuxhasa kunye nokudibanisa i-chakra yentliziyo yethu kunye nobukho bethu bomzimba kunye nalo mzimba.
Indlela abazali bethu ababethandana ngayo ibonakala kubudlelwane beLanga neNyanga, kwaye le yinto esiyiqaphelayo kwaye sikulungele ukuyamkela. Xa kukho ukungavisisani phakathi kwezibane, kwaneengxaki phakathi kwazo kulula ukuzibona yaye oku kusinika imvakalelo ecacileyo yezinto ekufuneka silungise kuzo. Ngakolunye uhlangothi, iSaturn kwitshathi yethu imele zonke ezo zinto eziye zashiywa zingachazwanga, iimvakalelo eziye zaphonswa ngaphandle, ukulungelelanisa, iinjongo ezingacacanga, kunye nezithintelo ezilethwe ngobudlelwane babo. Iya kubonisa apho saziva sicinezelekile okanye sisikelwe umda kwimigudu yethu yobomi yinkqubo nentsapho esazalelwa kuyo. I-Saturn inendlela yokuchaphazela ubudlelwane bethu ngamnye, njengeNyanga, kwaye iya kubonakala ngokucacileyo njengoko ixesha lihamba. Akumangalisi ukuba iSaturn ngokwayo imele isakhiwo esiphezulu sobudlelwane - umtshato.
Xa uthando olutsha luqala, abantu badla ngokulubona njengomlingo kunye nokudibanisa okumangalisayo ekuqaleni. Nangona kunjalo, ayilulo lonke ubudlelwane obuqala ngolu hlobo, kwaye uninzi lwethu luya kufumanisa ukuba imiqondiso yokungaqondani kunye nokwahlukana okunokwenzeka kwabonwa ngalo lonke ixesha. Nokuba kunjani na amandla okuphoxeka esinokuba nawo kubafowunelwa abasondeleyo, ukuba sigrumba nzulu ngokwaneleyo, siya kubona ukuba ngalinye lala mava angalunganga anxulumana nento esikhathazwa yiyo kubudlelwane bethu bokuqala ekhaya. Oku akulula ukukubona xa umzali womntu engasekho okanye enqweneleka, kodwa ukuba ujongeka nzima ngokwaneleyo, uya kubona ukuba kukho kanye okufanayo.
Kukho iindlela zonyango lwengqondo ezisifundisa malunga neepateni zethu kunye nezinto esizifunda ukuzamkela ebomini bethu ngokunxibelelana nabanye ababalulekileyo. Enye yeembono kukuba ukuqatshelwa kweepateni kusisondeza kumaqabane ethu kwaye kusityhalela ngokulula kwibhalansi ngexesha. Sekunjalo, ukuba sithembela elukholweni nakwinkolelo yokuba silapha ngenxa yokuba SINOKUZIlungisa izinto ezaphukileyo kumnombo wosapho lwethu, siya kubona ukuba imfuno yethu yokudlala iipateni kunye nezithunzi sisebenzisa amaqabane ebomini inokulungiswa ukuba siyaluphilisa ubudlelwane bethu. nabazali kunye nabo bema phambi kwabo. Undoqo ongundoqo weyona nto ilungileyo kunye nenyaniso emva kwesiganeko, kukuba akukho mzali ongenalo uthando kubantwana babo. Kwanabona bazali bandlongo-ndlongo, abacinezelayo, abona bazali baqaqadekileyo nabona bakude, okanye abo bangazi nokuba banabo abantwana, banomthwalo wabo onzulu wokuwuthwala nokubonisa uthando kangangoko banako ngeendlela ezize ngokwemvelo ngaphakathi. inkqubo yabo.
Ngokufuthi, uyise wentombazana uya kuzibona engakufanelekelanga ukuba ngumzali wayo, mhlawumbi esiba ndlongondlongo ukuze ayigcine kwinkqubo yokhuselo njengoko ebona oko, okanye akhethe ukuzikhwebula, ezama ukungayikhathazi ngokungabi nabuchule bakhe. Unina wenkwenkwe uya kumtyhalela kude kuhambo lwakhe lobudoda, eyamhlula kumzekelo wamabhinqa afanele awukhulise ngaphakathi, okanye ambambe kufutshane kakhulu ngelizama ukumkhusela ngokweemvakalelo kwihlabathi langaphandle, ngokungathi akanalo olwakhe. iindlela zeemvakalelo zokuphuhlisa. Oku kudala ubudlelwane obungeyomvelo bentlungu, endaweni yovuyo. Nokuba lithini na ibali lethu lobuqu, siqinisekile ukuba siyayiqaphela imiba esibambezelayo, ekhusela ngokugqithisileyo okanye ekude kakhulu, etyhalayo, enobundlongondlongo, okanye ebambelelayo, nabazali abangakwaziyo ukuthwala uxanduva olungaphezu kokuba bebetyhalwe ukuba baluthathe ebomini babo. Into ebalulekileyo apha kukubona ukuba ukungabikho koxanduva umntu aluthathayo kumntwana wakhe kuphela umfanekiso woxanduva oluninzi oluthathwe komnye umntu, kubazali, kubazali babazali babo, njl.
Into esinokuzenzela yona kukubona uthando. Jonga umgangatho kwezona meko zinzima kunye nabo basidalileyo. Nokuba abayiboni ngokwabo. Ngumsebenzi wethu ukucoca indlela yokuzibona sithandwa njengoko sinjalo ngokwenene, ngokuphila nje. Oku kunokubonakala kungenakwenzeka kwiimeko ezithile, kodwa iimbono zininzi. Ukuba sigrumba iimeko zethu zeemvakalelo, sidlule lusizi, umsindo kunye nengqumbo, sizivumele ukuba sizive kancinci kancinci, siya kubona ukuba emva kwayo yonke loo ntlungu yezinyanya kunye nemixholo ebonakala ngathi iyasitya siphila, yima abantu abangazange bazi. ngcono. Babenethuku, inyathelo lokuqala, kunye namandla obomi othando avuthela kwiiseyile zabo, ebanika amandla okusidala. Emva kwayo yonke loo nto, akukho bomi ekubonakalisweni kwayo ngokomzimba (ukuphakanyiswa kweNyanga kwi-3rd degree of Taurus ) ngaphandle kothando.
I-Capricorn I-Scorpio Isagittarius Aries Sagittarius